ကွန်ပြူတာနှင့်သက်ဆိုင်သော နည်းပညာများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ကွန်ပြူတာနှင့်သက်ဆိုင်သော နည်းပညာများ
Posted by Yin Nyine Nway on Feb 1, 2011 in Computers & Technology | 13 comments
Windows7operation system ကို edition အမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Windows XP နဲ့အရှေ့က Windows တွေမှာတုန်းက C:,D:, တွေခွဲထားပြီးလို့ ကိုယ်ကလိုအပ်လို့ နောက်ထပ်ခွဲချင်သေးတယ် ဆိုရင် Norton Partition Magic လို Third Party Softwares တွေသုံးပြီး လုပ်ရပါတယ်။ Windows7မှာတော့ အဲဒီ Feature တစ်ခါတည်းပါဝင်လာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Shrinkပါ။ My Computer –> Right Click –> Manage ကိုနှိပ်ပါ။ Computer Management ပေါ်လာရင် Storage အောက်က Disk Management ကိုရွေးပေးပါ။ ပြီးရင် ကိုယ် Partition ခွဲချင်တဲ့ Volume ( C:, or , D: ) ကို Right Click နှိပ်ပြီး Shrink Volume ကို နှိပ်လိုက်ပြီး ဆက်လုပ်သွားရင် partition ခွဲလို့ရသွားပါပြီ။
Web Design သမားတွေနဲ့ PhotoShop သမားတွေ အတွက် အထူးစပယ်ရှယ် HTML Color Code တွေနဲ့ RGB Code တွေ အလွယ်လေး ယူကြမယ် ။
ဆိုဒ်ကလည်း ဟိုပြောင်း ဒီပြောင်း ၊ ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့ နဲ့ ဆိုတော့….. ပိုစ့်တွေလည်း မတင်ဖြစ်ဘူး ။ ပျင်းနေတာနဲ့ …….(တင်စရာတွေ ကတော့ အများကြီးပဲ ဘယ်က စတင်ရမလဲ တောင် မသိတော့ဘူး ) ။ စာမရေးရတာလည်း ကြာပြီ ။ အခု တင်မယ် လည်း ဆိုရော ဘယ်က စရေးရမလဲ လဲ မသိတော့ဘူး ။ ဒီကြားထဲ MMiTD နဲ့ တော်တော် အဆက်ပြတ်သွားတယ် ။ မရတစ်ချက် ရတစ်ချက် ဆိုတော့ ။ ခုတော့ stable ဖြစ်ပြီ ထင်တာပဲ ။ (Creator မကလိတော့ရင်ပေ့ါ…. ဟိဟိ) ။ အဲ့ဒါနဲ့ တင်မယ် ပေ့ါ .. ဆိုပြီး ….. တင်လိုက်တယ်ပေ့ါ … ။
software လေးက သေးသေးလေးးး ။ ဒါပေမဲ့ … Web Design သမားတွေ ၊ Photoshop သမားတွေ နဲ့ Color တွေ ကိုင်ပြီး အမြဲ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့.. အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ software လေး တစ်ခုပေ့ါ …. ။ size ကလည်း 420 KB ဆိုလား မသိဘူး ။ အဲ့လောက်ပဲ ရှိတယ် ။
ဒါဆို .. ဘာ software လဲ ဆိုပြီး မေးစရာရှိတာပေ့ါ ..။ ဒီလိုပါ … ။
software လေးကို ဒေါင်းပြီး install လုပ်လိုက်ပါ ။ ပြီးရင် အဲ့ကောင်လေးကို open လိုက် ။ အဲ့ဒါဆို ရင် tray icon လေးနေရာမှာသူ့ icon လေး သွားပေါ်နေလိမ့်မယ် ။ စက်ဝိုင်းပုံစံလေး ထဲမှာ အရောင်လေးတွေနဲ့ .. ။
အဲ့ဒါဆိုရင်…. အဲ့ကောင်လေး ပေါ်မှာ mouse နဲ့ click ပြီး (left click) မော်နီတာ Screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ ကြိုက်တဲ့ နေရာပေါ်ကို Drift ဆွဲသွားလိုက် … ။ HTML Color Code တွေ ပြပေးလိမ့်မယ် ။ (right click က option မှာ ဘယ်လို HTML Code နဲ့ ယူမှာ ဆိုတာလည်း ရွေးပေးလို့ ရသေးတယ်နော်…. )
right click နှိပ်ပြီး color code တွေ ပြောင်းပေးလို့ ရတယ် ။ ပြောင်းပေးနိုင်တာတွေကတော့ …
HTML,Hex,Delphi Hex,VB Hex,RGB,HSB
အဲ့ color code တွေကို မိမိ လိုချင်တဲ့ ဟာသာ ပြောင်း ပြောင်းပေးနေ ။ Web Design သမားတွေ အတွက်ကတော့ လုံးဝကို တန်ဖိုးရှိပါလိမ့်မယ် ။
ပြောနေကြာတယ်ဗျာ …. ။ ဒေါင်းသာ ဒေါင်းလိုက်တော့ …. ။
ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးတည်းကို ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မများ စုပြီးတော့ သုံးနေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိကွန်ပျူတာကို မိမိမဟုတ်သော တစ်ခြား တစ်စုံတစ်ယောက်အား ပေးသုံးတာတွင် မိမိ မသုံးစေချင် မဖွင့်စေချင်သည့် ၀ဘ်ဆိုက်များကို ပိတ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုပေးလိုက်တဲ့ program နှင့် ပိတ်ထားလို့ရပါတယ် . ကျွန်တော်တို့ အဓိက ပိတ်ချင်တာက Porn ဆိုက်တွေကိုပါ . မိမိညီငယ် ညီမငယ်များ အရွယ်မရောက်သေးဘဲ ဒီလို ဆိုက်တွေကို မကြည့်စေချင်လို့ ပိတ်ထားချင် သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အခု program မှာ porn ဆိုက်ပေါင်း တစ်သောင်းကျော်ကို block လုပ်ထားပြီးသားပါ . မိမိအနေဖြင့် ထပ်ပြီးတော့ block လုပ်ထားချင်တဲ့ website များ ရှိပါက ထပ်ထည့်လို့ ရပါသေးတယ်. ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ .
Internet ကိုဘာ software မှမသုံးဘဲ မြှင့်ရအောင်
အခုကျနော်ပြောပြမယ့်နည်းကတော့ မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာကိုယ့်ဘာသာလုပ်ရမှ
အင်တာနက်ကို ဘာ software မှမသုံးဘဲနဲ့ မြန်အောင်လုပ်တဲ့နည်းပါ။ အောက်က
ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးလုပ်လိုက်ကြပါ။ စာနဲ့ ပြောရင်ရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့ပါ။ ပုံများလို့ကလေး
ပထမဆုံး window key + R နဲ့ Run Box ကိုအရင်ခေါ်လိုက်ပါ။
1. Run Box ထဲမှာ gpedit.msc ဆိုတာကိုရီုက်ထည့်လိုက်ပါ။
2. Administrative Templates ဆိုတာကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် ဘေးက box ထဲမှာ Network
ဆိုတာကိုတွေ့ ပါလိမ့်မယ်။ Network ကိုပါ Double Click နှိပ်လိုက်ပါ။
3. Network အောက်ကိုရောက်ရင် QoS Packet Scheduler ဆိုတာကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ။
4. ပုံ3ကအတိုင်းလုပ်ပြီးရင် Limit reservable bandwidth ဆိုတာကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ။
5. ပုံ4ကအတိုင်း လုပ်ပြီးရင်တော့ အထက်ပါပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Limit reservable
bandwidth ကို Enabled လုပ်ပေးလိုက်ပါ ။ Bandwidth limit(%)မှာတော့ 0
ထားပေးလိုက်ပါ ပြီး၇င် Ok နဲ့ ထွက်ပေးလိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင်ရပါပြီ။ Ok နဲ
့ထွက်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ window တွေကိုပါပိတ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့မိမိတို
့သုံးနေတဲ့ browser ကိုဖွင့်ပြီးသုံးကြည့်ပါ ပုံမှန်ထက်ပို မြန်နေပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက်။ ။ Window Xp SP2, Window Vista SP2, Window 7
အခု နည်းနဲ့ တွဲပြီးလုပ်ထားရင်ပိုပြီးမြန်ပါတယ်။
Stealing Passwords with Ettercap and How to Prevent
တစ်နေ့က youtube မှာ မွှေရင်းနဲ့ video တစ်ခု တွေ့လိုက်ပါတယ်။ ကြည့်ပြီးတော့ စမ်းသပ်လိုက်တာ လူတောင် မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်။ Ettercap ကို သူက သုံးပြသွားတာပါ။ Ettercap ဆိုတာက တကယ်တော့ Hacking Software လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ Local Network Security Measurement Software တစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ သူက တခြားစက်က လူတစ်ယောက်က Website တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီး Username နဲ့ Password ရိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်က သွားမကြည့်ဘဲ သိနိုင်တယ်ဆိုရင် စာဖတ်သူ စိတ်များဝင်စားမလား မသိဘူး။
ဥပမာ အင်တာနက်ဆိုင်ဆိုပါစို့။ မောင်မောင်နဲ့ ကျော်ကျော် အင်တာနက်သုံးနေကြမယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မောင်မောင်က သူ့ ကွန်ပျူတာမှာ Ettercap Software တင်လိုက်မယ်။ ပြီးရင် စောင့်ကြည့်နေလိုက်ရုံပဲ။ ကျော်ကျော်က Website တွေကို ဖွင့်ပြီး Login ၀င်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ချက်ချင်းဆိုသလို မောင်မောင်ဖွင့်ထားတဲ့ Ettercap Software မှာ ကျော်ကျော်သုံး သွားတဲ့ Username နဲ့ Password ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကဲ ကျော်ကျော်တော့ သွားပြီ။
ဒီနည်းပညာကို Sniffing လို့ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင် အနံ့ခံခြင်းပေါ့။ Sniffing ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သွားတယ်ဆိုတာ ဒီပုံလေးကြည့်ရင် ရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
အနီရောင်နဲ့လူကတော့ မသမာသူ မောင်မောင်ပါ။ မောင်မောင်သုံးနေတဲ့ Ettercap Software က ကျော်ကျော်အပြင် Network တစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေမှာတပ်ထားတဲ့ Network ကြိုးတွေထဲမှာ စီးဆင်းသွားလာနေတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ username နဲ့ password ဆိုရင် သူက ကောက်ယူ လိုက်တာပါ။ တခြား Password တွေကိုတော့ မယူနိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ Website ပေါ်မှာ ရိုက်ထည့်သမျှ Password (Gmail, Facebook, Twitter) တွေ အကုန်လုံးကို ရယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရသလောက် HTTP Secure Protocol သုံးတဲ့ Website တွေကလွဲလို့ တခြား Website တွေမှာ သုံးမိတဲ့ username နဲ့ password မှန်သမျှကို Ettercap က အသာလေး ရယူနိုင်ပါတယ်။ HTTP Secure Protocol သုံးတဲ့ site တွေကတော့ website လိပ်စာမှာ https:// ဆိုပြီး ပါတာတွေပေါ့။ Gmail သုံးရင်, Facebook သုံးရင် သတိထားမိကြမှာပါ။ အဲဒီလို https site တွေမှာသုံးတဲ့ username နဲ့ password တွေကိုတော့ ettercap က မယူနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တောင် Myanmar IT Men Website ကို https ပြောင်းလိုက်ပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ Ettercap Software မှာ အဲဒီ https မှာသုံးတဲ့ password တွေကိုပါ ခိုးနိုင်တဲ့ Function ပါပါတယ်။ Certificate အတုထည့်ပြီး ခိုးတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက သိသာပါတယ်။ စာဖတ်သူအနေနဲ့ Gmail, Facebook စသည်တို့ကို Log in ၀င်လိုက်တဲ့အခါ Box တစ်ခု ကျလာပါလိမ့်မယ်။ (အောက်ပါပုံကို ကြည့်ပါ)
အဲဒီ box မှာ ရေးထားမဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ Certificate က Untrust ဖြစ်နေတယ်။ မင်း လက်ခံမှာလား ဘာလားဆိုပြီး မေးနေတာပါ။ ဒါဆိုရင် သေချာပြီပေါ့။ ကိုယ့် Network ထဲမှာ Ettercap ကြီး ရှိနေပြီ။ ဘာမှ ဆက်မလုပ်ပါနဲ့တော့။ ကွန်ပျူတာကိုသာ ပိတ်လိုက်ပါ။
Cryptography: How password Encryption and Decryption is done
Well, I will be posting some FUD keyloggers and FUD Crypter on Techotoys. To prevent these FUD softwares from being detected by antiviruses, it is necessary to ensure that no careless noob gets access to such FUD softwares. And to ensure this, henceforth, I will password protect such FUD keyloggers and crypters. You will be given encrypted password and not the real password. You have to decrypt the password hash to unlock the FUD software.
So, I am writing this article on Cryptography to help you in decrypting the encrypted password string.
How to encrypt password???
Say, I want to encrypt the string: techotoys.blogspot.com
And the Encryption order is: Base 64-Reverse-String to Hex
a. So, to start with encryption, go to: http://www.crypo.com/eng_base64e.php
and enter our password: techotoys.blogspot.com in the text box. Hit on “Encrypt” to get the encrypted Base 64 password.
b. Now, next we have to Reverse the string obtained from step a. So, go to:
and enter the string from stepain the text box and hit on Reverse. Copy the string from second box.
c. Next is to encrypt with Hex. Go to: http://www.string-functions.com/string-hex.aspx
and enter the string copied in step b. Hit on Convert to get:
So, this is our final encrypted password.
Note: Crypo.com and String-functions are one of the best sites used for encryption and decryption. Their combination includes almost all types of encrypting methods.
How to decrypt encrypted password???
So, we are given the above encrypted password and need to get the actual real password.
The encrypted password we need to decrypt is:
Since Encryption order is: Base 64-Reverse-String to Hex
while decrypting, we need to follow exact opposite order.
So, Decryption order becomes: Hex to String-Reverse-Base 64
A. We have to convert Hex to String. Go to:
and enter the encrypted password. Hit on Convert and copy the resultant string.
B. Now, to reverse this string, go to:
and reverse it. Copy the reversed string.
C. To decrypt using Base 64, go to:
Thus, you have successfully decrypted your password.
So friends, this is all about how password encryption and decryption is done via Cryptography. I have just demonstrated it by illustrating one example. If you find any problem in this tutorial on how to encrypt and decrypt password, please mention it in comments.
Enjoy Cryptography to encrypt and decrypt passwords…
ဓါတ်ပုံတွေကို နောက်ခံသီချင်းလေးတွေနဲ့ မြန်မာစာတမ်းထိုးပြီး DVD Slide Show လုပ်ဖို့ Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe 6.0.2 Free Full Download
Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe 6.0.2
ဒီ Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe 6.0.2 ကိုသုံးပြီး မြန်မာစာတမ်းထိုးနောက်ခံသီချင်းလေးတွေနဲ့ photo တွေကို DVD slide show လုပ်ပြီး DVD စက်မှာကြည့်လို့ရပါတယ်
မြန်မာစာတမ်းထိုး subtitle တွေကို Time line နဲ့ လွယ်လင့်တကူလုပ်လို့ရပါတယ်
သီချင်းတွေကို မြန်မာစာတမ်းထိုးရတာ ဒီ Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe 6.0.2နဲ့တော်တော်လွယ်ပါတယ်
Photo တွေကိုလည်း effect မျိုးစုံထဲ့လို့ရပါတယ်
1.Rar file ကို Right Click ထောက်ပြီး Extract Here လုပ်ပါ
2.Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe.v6.0.2.upped by catman.exe ကို Run ပြီး Install လုပ်ပါ
3.ပေးထားတဲ့ License name နဲ့ serial number ကိုထဲ့ပြီး register လုပ်ပါ
4.Done !!! Full version ဖြစ်သွားပါပြီ
Free Download From ziddu.com
How To: Play .Swf Games/Flash Without Browser
ကျွန်တော်တို့ ပြင်း နေလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် အားနေလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့လို လူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ Games တွေကစားကြပါတယ်။ တကဲ့ Game ကြီးတွေမရှိတဲ့ သူတွေကြတော့ Online Flash Games တွေကစားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့သူတွေကြတော့ အဲဒီ Flash Games တွေကိုကြိုက်လို့ Download လုပ်ထားပြီး Browser တွေနဲ့ Play ကြပါတယ်။
ဒီ Tutorial လေးမှာကြတော့ Browser မလိုဘဲ .Swf File တွေကို Play နိုင်တဲ့ နည်းလေးကို Share လိုက်ပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးနည်းပြောရရင်တော့ဗျာ အဲ့ဒီ .Swf Flash Game ကို Download လုပ်ပြီး .Exe နဲ့ Convert လိုက်ရင် ကစားလို့ရပါပြီး။
အပေါ်က ဟာလေးကတော့ Adobe Flash Player v10.0 လေးပါ။ အဲ့ဒီ ဟာလေးကိုကျွန်တော့ Logo နဲ့ နံမယ်ပြောင်းထား ဒါပါ။ အပေါ်မှာပြထားတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ ကိုယ်လိုချင်ရင်တဲ့ .Swf File/Game ကို ဖွင့်ပြီး File > Create Projector… ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ .Exe နဲ့ Name ပြီး Save လိုက်ရင် ကစားလို့ရပါပြီးဗျာ။ ကျွန်တော် လုပ်ထားတဲ့ Flash Player နဲ့ လုပ်ရင်တော့ ကျွန်တော့ Logo ပါတဲ့ N ဆိုတဲက စာလုံးနဲ့ပေါ်လာပါ့မယ်။ Original နဲ့လုပ်ရင်တော့ F ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ ပါလာပါ့မယ်။
Adobe Flash Player တွေကို ကိုယ့် Logo/Name စသည့်ပြောင်းချင်ရင်တော့ Adobe Flash Player ကို အောက်မှာ Download ယူရင်း ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ Flash Player ကိုယူချင်ရင်တော့ အောက်မှာဘဲ တဆင့် ယူသွားလိုက်ပြီး Video Tutorial လေးကိုကြည့်သွားလိုက်ပါအုံး။
Download Adobe Flash Player v10.0
Download Adobe Flash Player v10.0 [re-created]
Web Development with PHP5Part 3
ကဲ အပိုင်း (၁) (၂) ကြားထဲမှာ (၃)လာဖို့ တော်တော်လေးကြာသွားပါတယ်။ exam ရှိတာရယ် project ရှိတာရယ် အလုပ်မအားတာရယ်နဲ့တင် မလှည့်နိုင်တော့လို့ ခုဆက်လက်ပြီး တော့ ပြောပြသွားပါမယ်။ စောင့်ဖတ်ရတဲ့ လူတွေလည်း ကိုရီးယားကားကြည့်သလိုဖြစ်နေပြီ… ကဲကဲ ဆက်လက်ပြီး တော့ ကြည့်ရအောင်…
3. < (Less Than)
4. > (Greater Than)
5. <= (Less Than or Equal To)
6. >= (Greater Than or Equal To) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Photo ၀ါသနာရှင်များ အတွက်ပါ ။ ဓာတ်ပုံလေးကိုတွေ ရုပ်ပြောင်လေးတွေ လုပ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို စရ နောက်ရတာ အရမ်းကို ပျော်ဖို့ ကောင်းပါတယ် ။ အဲ့လို ရုပ်ပြောင်လုပ်တဲ့ software တော်တော်များများနဲ့ အွန်လိုင်း ဆိုဒ် တော်တော်များများလည်း ရှိပါတယ် ။ တော်တော်များများကိုလည်း သုံးဖူးပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အရင်က သုံးသခဲ့သမျှဟာ ဒီဆိုဒ်လေးနဲ့ တွေ့့တော့ အကုန် သဲထဲ ရေသွန် ဖြစ်သွားရပါတယ် ။ (အောင်လွင်ကြီးလေသံ ဆိုရင် အရင်တုန်းက premier မသောက်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို နှမြောလိုက်တာဗျာ …..)
ဟ ..မင်းဟာ က ညွှန်းလှချည်လားပေ့ါ .. ။ သေချာလို့ လား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ခုချိန်မှာ ဖြစ်နေမှာပါပဲ ။ ဟုတ်တယ်လေ.. ။ ဘာမှ မှ မပြောသေးတာ .. ။ သိလည်း မသိသေးဘူးမလားးးး ။
ကဲ ဒီမှာဗျာ …. ။
Pizap (fun Photo Editor)
ပါတဲ့ဗျာ ။ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားရဲ့ ရုပ်ပြောင်ကို စပြီးမြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ဘေးက Start ဆိုတဲ့ button လေးမှာ စပြီးမိမိ ပြုပြင်ချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ရုပ်ပြောင် ပြုလုပ်လို့ ရပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ အသုံးပြုရတာတော့ အရမ်းကို ရိုးရှင်းပြီး လွယ်ကူလွန်းလှတာကြောင့် မိမိ စိတ်ကူး ရှိရင် ရှိတဲ့အတိုင်း ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံက ဟာသ မြောက်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
pizap က တစ်ခြား နာမည်ကြီး ဆိုဒ်တွေနဲ့ လည်း ချိတ်ဆက်ထားပါသေးတယ် ။
ယနေ့ ခေတ်ရဲ့ မရှိမဖြစ် Facebook က ပုံတွေကိုလည်းလိုသလို ပြုပြင်လို့ ရပါတယ် ။ တစ်ခြားနာမည်ကြီး photo ဆိုဒ်တွေ ဖြစ်တဲ့ Picasa,flickr,photobucket တို့ မှာ မိမိတို့ ဓာတ်ပုံ တွေ ရှိတယ် ဆိုရင် upload တောင် တင်စရာ မလိုပဲ ကြိုက်တဲ့ပုံကို ကြိုက်သလို ပြုပြင်လို့ ရမှာပါ ။
ဒီပိုစ့်လေး တင်ဖို့ အတွက် ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်လုံးကို မော်ဒယ် လုပ်ဖို့ ဌားပေးမဲ့ ဘယ်သူမှ ခွင့်မပြုတာကြောင့် ဘာဓာတ်ပုံ တစ်ပုံမှ မပါပဲနဲ့ ဒီအတိုင်းပဲ တင်လိုက်ရပါတယ် ။ (တစ်ဆက်တည်း မော်ဒယ် လုပ်ဖို့ ဝါသနာ ပါပြီး စိတ်ကူး ရှိသူများ ကျွန်တော်နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံ နဲ့ တကွ ကြော်ငြာပေးမှာပါ …… ) ကျွန်တော့် ပုံကတော့ ရုပ်တောင် ဖျက်စရာ မလိုပဲ နဂိုကတည်းက ခပ်ပြောင်ပြောင် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် (မျက်နှာနော်….) မတင်ပေးလိုက်တော့ပါဘူးးး ။ (တော်ကြာ ဘာပြောင်လဲဆိုပြီးးး လျှောက်တွေးနေမှာ စိုးလို့ …)
ကဲ .. အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ အကုန် အဆင်ပြေလောက်ပြီ ထင်ပါတယ် ။ အဲ့ဒါဆို ရင်တော့ မိမိသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို စတင်ပြီး ရုပ်ဖျက်လို့ ရနိုင်ပါပြီဗျာ ။ ပြီးရင်တော့ မိမိရဲ့ PC ထဲမှာ save ထားပေ့ါ ။ အနည်းဆုံး virus မ၀င်အောင်ပေ့ါ … ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ဓာတ်ပုံ ထုတ်ပြီး ကြွက်ခြောက်ကြပေ့ါဗျာ … ။
တစ်ယောက်ပုံ တစ်ယောက်ကြည့်… ခွက်ထိုးခွက်လန် ရီမောနိုင်ကြပြီး ဘ၀စိတ်အမောလေးတွေ ခဏဖြစ်ဖြစ် ပြေပျောက်ရင်ပဲ တင်ရကျိူးနပ်ပါတယ်ဗျာ ။
Windows764bit မြန်မာ Font ပြဿနာ
Windows7အသုံးများနေတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ ပြဿနာတွေထဲက မြန်မာ လက်ကွက် ပြဿနာလေးကို တင်ပြပေးပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိမှာ Windows7မှာ 32bit/64bit/86bit ဆိုပြီထွက်ရှိပါတယ်။ 32bit ကို အသုံးပြုရင်တော့ AlphaZawGyi ကို Run လိုက်တာနဲ့ KeyBoard ကနေ ရိုက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ 64bit တင်တဲ့ အခါမှာတော့ Alpha ZawGyi ကို Run လိုက်ပါတယ်။ ပြီတော့ မြန်မာဆိုဒ်တွေ ဖွင့်လိုက်တဲ့ အခါမှာ မြန်မာလို ပေါ်ပေးမဲ့ Keyboard ကနေ ရိုက်လိုက်တဲ့ အခါမှာ မြန်မာ Font က ထွက်မလာတော့ပါဘူး။
1.ပုံမှန်အတိုင်း AlphaZawGyi ကို Run ထားလိုက်ပါ
2.အောက်မှာ ကျွန်တော် ပေးထားတဲ့ WAR File မှ Setup.exe ကို အရင် Install လုပ်လိုက်ပါ။ (Repair ကို ရွေးပြီ RUN ပါ) ပြီရင် ZawGyil_amd64.msi ,ZawGyil_i386.msi နှင့် ZawGyi_ia64.msi ဆိုပြီရှိပါတယ်။ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု Run ကြည့်လိုက်ပါ။ ပြီရင် အဆင်ပြေသွားပါမည်။ မရပါက Restart ခဏချလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါမည်။
blog တခု လုံး များ လာတင်သွားလားမသိ ဘူးးP
ဟုတ်ဘူး…ဖော်ဝေါ့ကနေ တင်ပေးတာ သိစေချင်လိုဟေ့ သိစေချင်လို့
good hta good hta
Thank alot for your post….
စမ်းလုပ်ကြည့်မယ်နော် ။မရလို ပြန်မေးရင် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ ဖြေပေးပါနော်။
(Internet ကိုဘာ software မှမသုံးဘဲ မြှင့်ရအောင်)
window xp sp3 မှာကောသုံးလို.ရလား
ကျနော်တင်တုန်းက member မဟုတ်ဘူး အခုမှသေချာကြည်.မိတယ် profile မှာပြင်လို.လဲမရဘူး
ရမှာပေါ့ sp2 တောင်ရသေးတာပဲလေ
နာမည်ပြောင်းချင်ရင်တော့ admin ကိုမေးပေါ့ ဟီး
ကောင်းပါတယ်ဗျာ… အခုလိုစုပေးထားတော့လဲ၊ နည်းပညာရပ်တွေက အသစ်အသစ် ထွက်နေတယ်ဆိုတော့ သိသလောက်လေး Shared ပေးကြတာ ကောင်းပါတယ်…
အရမ်း အရမ်း ကျေးဇူးပါကွယ်..။
ဘာဆော့ဝဲလ်မှမသုံးပဲ အင်တာနက်ကို မြှင့်ရအောင်ဆိုလို့ အင်တာနက်မရှိရင်ကော မြှင့်လို့ရလားဟင်
ခုလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပေးတာကျေးဇူးကမ္ဘာဘဲဗျာ….